Hushumiri hwaJesu hwakatora nguva yakareba sei?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Hushumiri hwaJesu hwakatora nguva yakareba sei?
Hushumiri hwaJesu hwakatora nguva yakareba sei?
Iyi inyaya yakaoma inobereka mifungo yakawandisa.
Kutanga kwehushumiri hwaJesu
Ngatitangei nekubvunza “hushumiri hwaJesu hwakatanga rini?
Ruka 3:1 Negore regumi namashanu rokubata kwaTiberio Kesari,
23 Zvino iye Jesu wakanga anamakore anenge makumi matatu,
Hushumiri hwaJesu hwakatanga mugore regumi nemashanu rekubata kwaTiberio Kesari.
Augastus aive muzukuru wehanzvadzi yaJuriasi Kesari. Aive atora simba guru nechisimba nekunyepedzera kuti seneta weRoma aive amugadza. Aive ashungurudza Roma nekusimuka pamasimba kwake nehutsinye hwake hwakanyanya nerudo rwekudeura ropa. Maseneta aitya kwazvo kurega kungomugadza pachigaro chekuva mubati. Kuti abvise kunyadziswa paari, akaisa mutemo wekuti maseneta ndiwo ega anotenderwa kugadza vabati. Asi vaifanira kutanga vanzwa kubva kwaari kuti chii chaaida kuti chiitwe, ivo vobva vaita sekureva kwake. Akaita mwanakomana wake wekurera Tiberio mubatsiri wake pakubata kwake muna 12AD. Izvi hazvina kungoita Tiberio mubati pakafa Augastus muna 14 AD. Nemurairo weRoma maseneta aifanira kutendera kuti ave mubati vomupa chigaro ichocho.
Izvi zvaive zvakachenjera nekuda kwezvikonzero zvitatu.
Chekutanga, Augustus aive ndiye mubati wekutanga weRoma, saka paive pasina umwe muenzaniso wezvakamboitwa wekugadzwa kwemunhu anotsiva chinzvimbo ichi.
Chechipiri, Augustus naTiberio vainyepedzera kurarama kunge vasiri vabati pamusoro pevanhu. Mambo ega ndiye anopa chinzvimbo chake kumwanakomana wake. Mubati haakwanisi kuita izvi. MaRoma aive akavenga madzimambo. Juriasi Kesari aive atora Augastus kuva mwanakomana wake wekurera, aive auraiwa nekuti vanhu vaitya kuti aizozviita mambo pamusoro pavo. Aive atozviita mudzvanyiriri zvehupenyu hake hwese.
Mumutemo weRoma, mwanakomana aizotenderwa kuva mubati nemaseneta mumashure mekufa kwababa vake (kana baba vekurera). Nenzira iyi mubati, anotonga kunge mambo, ainepedzera kunge asiri mambo. Saka kunyange Tiberio aive mubatsiri wemubati haana kubva angoitwa mubati.
Chechitatu, Augastus aive nemuzukuru Agiripa Posthumus aive achipomerwa kumupandukira. Augustus akamuvharira mutorongo mukatsuwa kaive pedyo neCorsica, kaidaidzwa kuti Puranesia.Muna 13 AD Augustus akamushanyira akaratidza kuva akamuregerera uye ane hanya naye. Sezvo Agiripa aive mwana wehukama hweropa raAugustus, asiri wekuwana saTiberio, vazhinji vakanzwa mumoyo mavo muchiti Agiripa ndiye aizova mubati aitevera.
Saka pakafa Augustus muna 14 AD, Agrippa aifanira kubva auraiwa kuitira kuti kushaikwe mukwikwidzi angazotora chinzvimbo chemubati kubva kuna Tiberio. Tiberio akabva akasika kumuuraisa ipapo ndipo paakazoudza maSeneta kuti Augustus aive afa. Vakabva vangonyeperawo kuita kunge vane tsika nekumupa chinzvimbo, chaakaita nguva yakati rebei achiramba. Pakupedzisira akazonyepedzera kubvuma chinzvimbo chacho seaive asingadi. Saka muna AD 14 ndimo makazoitwa Tiberio mubati.
Mugore rechigumi nemashanu rekubata kwake, aizova makore 14 + 15 = 29 AD.
Apa ndipo pakatanga kuonekwa Johane Mubapatidzi.
Ruka 3:21 Vanhu vose vakati vabapatidzwa, naiye Jesu abapatidzwa vo, achinyengetera, denga rikazarurwa.
22 Mweya Mutsvene akaburukira pamusoro pake nomufananidzo wakaita sowenjiva, inzwi rikabva kudenga, richiti: Ndiwe Mwanakomana wangu, unodikanwa; ndinokufarira.
23 Zvino iye Jesu wakanga anamakore anenge makumi matatu, nguva yaakatanga kudzidzisa, ari, pakufunga kwavanhu, mwanakomana waJosefa, mwanakomana waHeri,
Saka Jesu akabapatidzwa AD29 akuda kunopera.
Saka tawana chiratidzo chenguva yekutanga kwehushumiri hwaJesu.
Evangeri raJohane rakataura pamusoro pemitambo mitatu yepaseka. Zvinoreva kuti paive nemakore maviri pakati pemitambo mitatu iyi yaiitika kamwechete pagore rega rega.
Asi kwaivewo neumwe mutambo pakati . Saka izvi zvinoita kuti hushumiri hwaJesu huite makore matatu pakati pemitambo mina iyi.
Iyi ndiyo yaive paseka yekutanga yaizoitwa pakati paKurume muna AD 30.
Zvino pamberi mugore iroro Jesu akadarika nemuguta reSikari muSamaria.
Aitaura kuvaSamaria achivaudza kuti nguva yavo yekukohwa yaizovako mwedzi mina yaiuya.
Johane 4:5 Zvino akasvika paguta reSamaria, rainzi Sikari,
John 4:35 Ko imi hamuti: Kwasara mwedzi mina, kucheka kwasvika?
Saka izvi zvakaitika munguva ipi yegore?
Gore remaJuda raipatsanura kuita zvidimbu zvitanhatu zvine mwedzi miviri. Nguva imwe neime yaitanga nekupera nechepakati pemwedzi.
Nguva yembeu Chando Matsutso Kukohwa Chirimo Zuva rakanyanya
Gumiguru, mbudzi Zvita, Ndira Kukadzi, kurume Kubvumbi, Bambwe Chikumi, chikunguru Nyamavhuvhu, Gunyana
Jesu akataura nevaSamaria paSikari akataura kuti kwaive nemwedzi mina kuti vasvike panguva yekukohwa yaizotanga pakati pakubvumbi.
Mwedzi mina tisati tasvika pakati pakubvumbi tinoona kuti maive muna Zvita. Ndipo Jesu paaive paSikari.
Mitambo yemaJuda yaitanga nePaseka nechingwa chisina mbiriso muna Kurume.
Zvibereko zvekutanga zvegoho zvaive muna Kubvumbi uye Pentecosti, yakazoitika mazuva makumi mashanu mumashure memutambo wemuna Kurume, saka kwaizova kutanga kwaBambwe.
Zvino zuva reKunatswa, mutambo weHwamanda, uye mutambo wematumba waive muna Gunyana.
Saka Johane Chitsauko 4, Jesu aive paSikari muna Zvita. MuChitsauko 5 chaJohane akapemberera mutambo. Mutambo wePaseka unogaroita wekutanga. Mimwe mitambo yese yotevera pakati pemwedzi waKurume naGunyana.
Johane 5:1 Shure kwaizvozvo, mutambo wavaJudha waivapo; Jesu akakwira Jerusarema
Mutambo wakauya mumashure mekushanya kwake paSikari, waifanira kuita Paseka kana mumwechete wemimwe mitambo yese. Saka kana uri mumwe mutambo zvino mutambo wePaseka vaive watopembererwa kare mutambo uyu usati wasvika. Saka kwaifanira kuita Paseka gore iroro, mutambo waaive aenda usati wasvika.
Saka Johane chitsauko 5:1 waive mutambo wePaseka wegore 31 AD, kana kuti waive mumwe wemitambo yaizotevera mumashure mePaseka yegore 31 AD. Zvakadaro, mutambo uyu waive Paseka yegore 31 AD, kana kuti imwe nguva mumashure mePaseka yegore 31 AD.
Zvino tinosvika paPaseka inotevera yaifanira kuvam una 32 AD.
Johane 6:4 Paseka mutambo wavaJudha, wakanga uri pedo.
Zvino tinobva tauya pamutambo wePaseka yekupedzisira yegore 33 AD.
Johane 11:55 Zvino paseka yavaJudha yakanga yava pedo, vanhu vazhinji venyika iyo vakakwira Jerusarema, paseka isati yasvika, kuti vazvinatse.
Makore matatu nehafu
Saka mutambo wePaseka unofanira kuva wakaitika muEvangeri raJohane : 30 AD, 31 AD, 32 AD, kana 33 AD.
Paseka imwe neimwe yaitwa gore rimwechete kubva pane imwe. Pane mikana mitatu pakati pemaPaseka mana aya.
Saka hushumiri hwaJesu hwakatora makore anosvika matatu.
Mazuva matatu kuti avigwe nemazuva makumi mana kubva pakumuka kwake kusvika pakukwira kwake kudenga anoita mazuva 43 unova mwedzi umwechete nehafu. Chiprofita chinoshanda nemwedzi wemazuva makumi matatu.
Pedyo nekutanga kwehushumiri hwake, kubva musi wa 1 Ndira na 14 Kurume wegore 30 AD, inotipa mwedzi miviri nehafu.
2½ + 1½ = 4 mwedzi.
Saka Jesu akabapatidzwa mwedzi miviri 29 AD asati apera, toti kunopera kwaGumiguru, naizvozvo anoita hushumiri hwemwedzi mitatu mehafu.
Kune Mamwe Magwaro herc anotsigira hushumiri hwemakore matatu nehafu?
Zuva rimwe muchiprofita rinokwanisa kumiririra gore rimwe.
Rabani akataura naJakobo akamuudza kuti aifanira kushanda makore manomwe kana Jakobo aida kuwana mwanasikana wake Rakeri.
Danieri 9:27 Zvino iye achaita sungano yakasimba navazhinji vhiki imwe; pakati pevhiki achagumisa chibayiro nechipo, zvino muparadzi achasvika nebapiro rezvinonyangadza; kusvikira pakuguma kwazvo kwakagara kwakatarwa, kutsamwa kuchadururirwa pamusoro pezvakaparadzwa."
“Iye achaita sungano navazhinji kwevhiki rimwe”: Jesu aizoita hushumiri hwemakore manomwe nemaJuda. Aizovagadzirirakuti vatonge nyika vari muIsraeri. Asi vakamuramba paCalvari.
“Pakati pevhiki achagumisa chibairo nechipo”: Pakati pehushumiri hwemakore manomwe, nemamwe mazwimumashure memakore matatu nehafu, akabva afa paCalvari. Mwari akabvarura chidzitiro cheTembere sechiratidzo chekuti kunamata muTembere kwaive kwaguma. Kristu aive chibairo chezvivi, uye chipo chake chakaita kuti zvibairo zvemhuka zvese zvigume. Zvibairo zvemhuka hazvichareva chinhu. Ropa raKristu chete ndiro rinoripira zvivi.
“Zvino Muparadzi achasvika nebapiro rezvinoparadza, kusvikira pakuguma”: Roma yakaparadza Temberi neJerusarema muna AD70. Zvino muna AD 135 Roma zvakare yakaparadza guta, ichiisiya iri matongo ikaita nzvimbo iyoyo matongo nekudzinga maJuda muJerusarema. MaRoma akavaka Temberi yechipegani kuna Jupita Capitolina panzvimbo yaive yakavakwa Tembere, yaive nyangadzi inoparadza yechipegani sezvo yaive iri panzvimbo peTembere.
Nyangadzi inoparadza iyi yaizoenderera mberi panzvimbo yeTembere, yaimbova Nzvimbo Tsvene chiitiko cheCalvari chisati chaiitika. Mugore 691 Dome of the Rock yakavakwa nemaMosiremu panzvimbo chaipo paive neTembere, uye Mosiki ye Al-Aqsa yakapedziswa mugore 705 AD. Saka kusvika kwemuparadzi kwakaenderera mberi.
“Kusvika pakuguma kwazvo kwakagara kwataurwa, kutsamwa kuchadururirwa pamusoro pezvakaparadzwa”: Zvivakwa zvemaMosiremu zvichavapo kusvika pakuguma. Parizvino zvakamirapo kwemakore anosvika 1300.
Ipapo maJuda airwadziswa, achidzingwa munyika yavo yechipikirwa, vakararama nguva refu vari vapoteri kwemakore anoda kusvika 2 000, nzvimbo yeTembere yavo ichiramba iri nyangadzi pasipechitendero chakaipa. MaJuda paakadzokera muIsraeri muna 1947 vakarwa hondo huru ina. Kurwiswa kunorwadza kwakaramba kuchiuya kubva mukati zvese nekunze ksenyika iyi. Ruvengo rukuru rune maArabu nemaParesitina haruna muganhu. Golda Meir, Mutungamiriri wechiJuda, akapomera maArabu kuvenga maJuda kukunda rudo rwavanarwo kuvana vavo, vavanokurudzira kutakura mabhomba anovaurayawo. Hupenyu hwakaomera maJuda aya akapona paHorokasiti, yakaona maJuda mamiriyoni matanhatu achifa mumakamba eNazi muhondo yepasi rese yechipiri.
Asi kubva mumakore 2 000 ekurwadziwa aya pakasimuka muchina usina kutya uye wakasimba wehondo. Nyika dzinorwisa maJuda zvadzoasi dzichikundwa.
“Kwakagara kwakatarwa”: Mwari aiziva kuti ruvengo nekurwiswa kwakadii kwaizowira Israeri. Sematambudziko aJobo, Satani anogona kuparadza kwazvo ozosiya.
Kana zvapera zvese, Mwari wedu acharatidza kuti akasimba uye mukuru kukunda Satani. Neimwe nzira Jesu achatora maJuda 144000 munguva yeKutambudzika kukuru, zvisinei nekuparadzwa kwese kwakasangana nemaJuda.
Danieri 9:27 Zvino iye achaita sungano yakasimba navazhinji vhiki imwe;
Tarirai sungano haisi kutanga kuitwa iri kusimbiswa.
Saka yakaitwa rini, uye yakasimbiswa rini?
VAROMA 15:8 Nokuti ndinoti: Jesu Kristu wakaitwa mushumiri wokudzingiswa kuratidza zvokwadi yaMwari, kuti asimbise zvakapikirwa madzibaba.
Kristu akauya kuzosimbisa zvaaive avimbisa tateguru wemaJuda.
VAGARATIA 3:17 Zvino ndinoreva chinhu ichi, ndichiti; Sungano yakasimbiswa kare naMwari, munaKristu, haitorerwi simba rayo nomurairo wakazotevera makore mazana mana namakumi matatu apfuvura, kuti chipikirwa chikoneswe.
Eksodo, apo Mosesi akapiwa Gumi remitemo, zvakaitika makore ana 1500 BC. Makore 400 musati masvika apa anokusvitsai panguva yaAbrahama.
Mwari akaita sungano naAbrahama apo Mwari akavimbisa nyika yeIsraeri kuna Abahama, aifanira kubaira mhuka kuti aripire zvivi. Sungano iyi yakazadziswa apo Kristu, seGwaiana rechibairo, akaripira mubairo mukuru kuzvivi zvevanhu vese paCalvari.
Genesisi 15:18 Nomusi iwoyo Jehovha akaita sungano naAbhu­ramu, akati, "Vana vako ndavapa nyika iyi, kubva parwizi rweIjipiti kusvikira kurwizi rukuru, runonzi Yufuratesi.
10 Akandomutorera izvozvo zvose, aka­zvipamura napakati, akagadzika rumwe rutivi rwakatarisana norumwe; asi shiri haana kudzipamura.
Genesis 17:19 Mwari akati kwaari, "Kwete, asi Sara, mukadzi wako, ndiye achakubere­kera mwanakomana, unofanira kumutu­midza zita rinonzi Isaka; ndichaita su­ngano yangu naye, ive sungano isingaperi pakati pavana vake vanomutevera.
Zvinoita sekuti Sungano yakaitwa kuti maJuda apihwe nyika yechipikirwa, vana vaizoberekwa naIsaka.
Asi izvi zvaive zvenguva duku.
VAGARATIA 3:16 Zvino, izvo zvipikirwa zvakarebwa kunaAbhurahamu nokumwana wake. Haarevi, achiti: Kuvana vako, savanenge vari vazhinji; asi saanenge ari mumwe, unoti; Kumwana wako; uyu ndiye Kristu
Isaka aive mwanakomana waAbrahama wekubereka.
Jesu ndiye aive mwanakomana waAbrahama wekutenda. Jesu paCalvari ndiye aive zvese zvaimiririrwa nesungano yaMwari kuna Abrahama. Pasina Calvari, sungano dzakaitwa kunaAbrahama dzingadai dzisina kuzadziswa.
Shiri dzaimiririra ruponeso nekurapwa. Hazvigoni kupatsanurwa. Kana uchikwanisa kuwana kuponeswa pamweya paCalvari unokwanisawo kuwaka ruponeso pamuviri.
Mhuka dzakachekwa nepakati mahafu acho ari maviri akagadzikwa akatarisana . Izvi zvinomiririra Testamente Yekare neTestamente Itsva. Hushumiri hwaKristu hURwakauya pakati pawo mumaBhuku mana eEvangeri.
Abrahama akavata. Saka sungano iyi yaive isina chekuita nekushingirira kwake.
Sungano yaive yenyika yechipikirwa, asiwo yechimwe chinhu chakadzama- ruponeso rwemweya yevanhu.
Kuvata mucherechedzo werufu. Kutyisa kwerufu kwatiri vanhu ndekwekuti tinopedzisira taenda kugehena. Iri irima risingagumi pamweya nekuti hakuna Mwari kugehena. Gehen harinawo nzira yekutiza nayo moto. Saka rinotibata mumarwadzo, topedzisira taita kunge mwana anochemera mai vake asi pasina amai vanodaira kudana kwake. Kuoma kwehupenyu hwemunhu ndekwekuti kana hukaguma, tiri pakaoma kwazvo tiri mugehena, gehena rinozokandwa mudziva remoto mumashure mezuva rekutongwa.
Zvakazarurwa 20:14 Ipapo rufu neHadhesi zvakakandirwa mudziva romoto. Ndirwo rufu rwechipiri, ndiro dziva romoto.
Kana tikazvarwa kamwechete, tinofa kaviri. Pekutanga tinopinda muguva, tozopinda mudziva remoto.
Ndicho chikonzero nei tichida Muponesi.
Zuva rakadzima musi wakafa Jesu.
Pane chiutsi pane moto. Chiutsi chinobuda kubva mugomba regehena kwaakanosiya zvivi zvedu akazvikandira kuzvidzosera kuna Satani.
Chiutsi chinomiririra dzidziso dzevanhu dzisina kunyorwa muBhaibheri. Kisimusi, Tiriniti, Masangano, nguva yeKutambudzika yemakore manomwe, nezvimwe zvakadaro. Hamuoni zvakanakisa muchiutsi. Dzidziso idzi dzese dziripo pakuvhariridza chokwadi kuti tisaone nekunzwisisa zvakanyorwa muBhaibheri.
Makereke akundikana kunzwisisa zvinoreva micherechedzo iri muBhaibheri. Saka havanzwisisi zvikamu zvikuru zveBhaibheri. Vanhu zvino vave kufuratira Magwaro ese avasinganzwisisi. Kudzima chiedza kunounza rima. MaKristu haazivi kuti chivi chekutanga chaive chii. Havanzwisisi zvinomiririrwa nemucherechedzo wemuchero kuna Genesisi. Vanofunga kuti Eva akadya muchero unotemhwa mumuti, asi vasingagoni kutsanangura kuti nei michero yese yakanzi yakanaka pazuva rechitatu.
Genesisi 1:12 Nyika ika­meresa uswa, nemiriwo inobereka mbeu dzina marudzi adzo, nemiti inobereka michero, mbeu dzayo dziri mukati mayo, inamarudzi ayo; Mwari akaona kuti zva­kanaka.
Ndicho chikonzero nei Jesu akataura kuti chinodyiwa nemunhu hachisvibisi munhu. Hakuna muchero wekudya waizosvibisa Eva. Kudya muchero worangwa nemarwadzo pakuzvara mwana-- hazvina maturo. Nei Mwari asina kumuudza kuti atendeuke? Imi neni takaudzwa kuti titendeuke, asi takaita zvinhu zvakaipa kwazvo kudarika kudya muchero.
Jesu akarovera dzidziso iyi yekudya muchero sehumbowo hwekusaziva, nemamwe mazwi kushaiwa kunzwisisa.
Marko 7:18 Akati kwavari: Nemi vo hamunzwisisi saizvozvo here? Hamunzwisisi here kuti zvose zviri kunze, kana zvichipinda mumunhu, hazvipindi mumoyo make asi mudumbu, zvichirashwa kunze, kana zvichipinda mumunhu, hazvigoni kumusvibisa?
19 Nokuti hazvipindi mumoyo make asi mudumbu, zvichirashwa kunze; nokutaura kwakadaro wakanatsa zvokudya zvose.
Mukadzi anomiririra kereke. Kereke yechokwadi ndiyo Mwenga waKristu. Vasikana vane gumi kuna Mateo Chitsauko 25 vaimiririra maKristu akaponeswa. Asi zvisinei kuti vaive vakangwara here kana vakapusa, vese vaive vakarara.
Saka makereke nhasi uno ari muchinzvimbo chaive Abrahama. Kereke yekupedzisira, Raodikia, inotsanangurwa sebofu, uye yakasvipwa kubva muShoko raMwari. Kereke iri kuenda pakusaziva Bhaibheri sezvo dzidziso dzayo zhinji dziri kurasika. Sezvazvaive mazuva aRoti paaigara muSodoma.
Asi paive netariro imwechete, choto chinopfungaira. Mweya Mutsvene uchifamba uchiburukira kugehena pakati peTestamente Yekare neTestamente Itsva. Jesu akatakura zvivi zvedu nemukati mwemoto wegehena kuti anozvirasira pana Satani, saka aizotisunungura kubva kuzvivi zvedu zvatakareurura nezvatakasiya.
Dai takatakura zvivi zvedu tega kupinda mugehena tingadai takanyunguduka takamedzwa nemoto.
Vanhu vekuIndia vanofamba mumoto vanodzidzira kufamba pamarasha anopfuta, saka vanofunga kuti kana vakafa vanozogona kuzvitakurira zvivi zvavo voga mukati memoto wegehena vonozvisiya panaSatani. Asi moto wavanofamba pamusoro pawp idambe chairo kana zvichinzaniswa nechaiwo wakavamirira. Hakuna kana mumwechete wevanhu vekuIndia ava anobvuma kufamba mumoto wesango wekuCalifornia. Asi chero iwoyo hauverengwe kana tichienzanisa nekumedzwa nekukura kwekutsamwa kwaMwari.
Zvakazarurwa 1:15 Tsoka dzake dzakanga dzakafanana nesafuri inopenya, inenge yakanatswa muvira;
Jesu ega ndiye akakunda nekubuda mugehena.
Choto chinopfuta waive Mudzimu wake Unoyera, wakabviswa pamuviri wake nerufu-- zvinomiririrwa nemucherechedzo wechibairo chimwe nechimwe chakapatsanurwa nepakati. Muviri wake pamuchinjikwa wakaripira muripo, Mudzimu Unoyera ukakunda hondo iyi mugehena. Mudzimu mweya wemunhu akafa. Midzimu yega ndiyo inogona kupinda mugehena, kwete mweya yevanhu vanorarama. Nemuviri wake wakafa uri muguva, Mweya waKristu waive wakukwanisa kushanda semudzimu unoyera mugehena, maakanokunda Satani nemadhimoni ake munzvimbo dzevakarasika akatora makiyi erufu neehadhesi kubva kuna Satani. Parizvino Satani ava hondo yakakundwa kunge chikara chakatyoka musana. Satani achiri kukwanisa kuruma asi akakurirwa kare. Nguva yake yakaisirwa muganhu. Hondo iri pakati pechiedza nerima yakaitika pakati pemaTestamente maviri. MumaBhuku mana eEvangeri Jesu ega ndiye aiziva zvaiitika. Kereke yakazotangakufambira mberi muBhuku raMabasa aVapostora. Vachibva vazoburitsa Testamente Itsva inova Muenzaniso mukuru wekereke.
Ko makore matatu nehafu asina kuzobvira awanikwa nemaJuda?
Danieri 9:25 Naizvozvo chiziva unzwisise, kuti kubva pakutemwa kwomurayiro wokuvandudza nokuvaka Jerusaremu kusvikira kune wakazodzwa, iye muchinda, zvichaita vhiki nomwe; uye vhiki dzina makumi matanhatu nembiri dzichavapo dzokuvakwa kwaro, rine misika nemigwagwa, asi zvichaitwa nenguva yokutambudzika
Muna 459 BC, mugore rechinomwe ramambo Artaxerxes, Ezira akapiwa murairo wekunodzosera mudziyo unokosha wemuTembere kana wemba yaJehova yaive yavakwa.
Artaxerxes akaitwa mambo mugore ra 465 BC. Saka kana 465 raive ndiro gore rake rekutanga kutonga saka 459 raizova gore rake rechinomwe.
Ezira 6:15 Imba iyi ikapedzwa nezuva retatu romwedzi weAdhari pagore retanhatu rokubata ushe kwamambo Dhariusi.
Temberi yaive yavakwa muna 515 BC, nguva refu Ezira asati aenda kuJerusarema.
Ezira 7:27 "Jehova Mwari wamadzibaba edu ngaakudzwe, iye akaisa chinhu chakadai mumoyo wamambo, kuti anatse imba yaJehova iri Jerusaremu;
Ezira aive nemurairo wekutora mudziyo kuti anoudzosera kuTembere waizoiita kuti inatswe.
Uku kwaive kusiri kuvakwa zve kwemasvingo nemigwagwa. Panosangana masvingo nemugwagwa panovakwa musuwo.
Asi muna 446 BC Nehemia akapihwa murairo, mugore rechimakumi maviri rekutonga kwaArtaxerxes, akapiwa tsamba yekumutendera kuvaka patsva masvingo aive akawira pasi uye masuwo ese eJerusarema.
Muna 465 BC raive gore ramambo rekutanga, muna 446 BC raizova gore ramambo rechimakumi maviri.
Nehemia 2:13 Ndikabuda usiku napasuo roMupata, ndikaenda nokutsime reShato, nesuo raMarara, ndikacherekedza masvingo eJerusaremu akanga akoromoka, namasuo aro akanga atsva nomoto.
Nehemia 4:17 Vaivaka rusvingo, navaitakura mitoro, vaitutira; mumwe nomumwe wakabata noruoko rwake rumwe pabasa, asi norumwe akanga akabata nhumbi yake yokurwa nayo;
18 uye vavaki mumwe nomumwe akanga anomunondo wake wakasungirwa pachiuno chake; vakavaka saizvozvo.
Idzi dzaive nguva dzaityisa uye dzaitambudza kwazvo.
Saka Nehemia aive nemvumo yekuita chaizvo zvaive zvaprofitwa naDanieri.
Danieri 9:25 Naizvozvo chiziva unzwisise, kuti kubva pakutemwa kwomurayiro wokuvandudza nokuvaka Jerusaremu kusvikira kune wakazodzwa, iye muchinda, zvichaita vhiki nomwe; uye vhiki dzina makumi matanhatu nembiri dzichavapo dzokuvakwa kwaro, rine misika nemigwagwa, asi zvichaitwa nenguva yokutambudzika.
Zvidimbu zvitatu zvenguva zvakataurwa.
Mavhiki manomwe anoreva kuti 7 x 7 = makore 49
446 - 49 = 397 BC Iyi ndiyo nguva yekuprofita kwaMaraki zvichibva paruzivo rwemudzidzisi weBhaibheri ainzi Scofield. Maraki muprofita asinganzwisisiki zvichibva pakuti akanyora rini chiprofita chake. Vanhu vakasiyana vanomuisa panguva dzakasiyana. Mazuva aya akasarudzwa nekuti anofambirana zvakazara nemakore 49 akataurwa naDanieri.
Makore 49 aya haana chekuita nekuvakwa kweTemberi nekuti izvi zvaive zvaitwa negore 515 BC, nguva refu Nehemia asati apihwa basa rake.
Kuchibva kwazouya nguva refu yerunyararo yemakore anoda kusvika 4 00 kunosvika pakuzvarwa kwaKristu nemamwe makore 30 asati atanga hushumiri hwake.
hushumiri hwaKristu hwakatanga 29 AD akuda kunopera paaive oda kusvika makore 30.
Danieri 9:26 Zvino kana vhiki idzo dzina makumi matanhatu nembiri dzapera, akazodzwa achabviswa, akasara asina chinhu; vanhu vomuchinda, anozouya, vachaparadza guta nenzvimbo tsvene; asi kuguma kwazvo kuchauya nokukukurwa, kurwa kuchavapo nokuparadzwa kwakatemwa, kusvikira pakuguma.
“Kana vhiki dzinamakumi matanhatu nembiri dzapera, Messiasi achabviswa”: Kristu anobviswa pakati pevhiki rekupedzisira, makore manomwe ekupedzisira.
Hushumiri hwake hwaive makore matatu nehafu. Haana kuzvifira, akatifura.
“vanhu vomuchinda, anozouya, vachaparadza guta nenzvimbo tsvene;”
VaRoma vakaparadza Jerusarema neTembere. Saka kana muchinda waantikristu achiuya, achauya achibva kuRoma.
Roma yechipegani ndiyo yakaparadza maJuda.
ChiRoman Catholic ndicho chichaparadza kereke nekuibvisa paMagwaro.
“asi kuguma kwazvo kuchauya nokukukurwa, kurwa kuchavapo nokuparadzwa kwakatemwa, kusvikira pakuguma.”
ChiRoman Catholic chichava nevanhu vazhinji kwazvo. Vachazadza nyika sevakadururwa. Kune vanhu vanonamata mukereke yeRoman Catholic vanosvika bhiriyoni. Mai vemakereke vakadzidzisa vanasikana vavo vakabuda muRoma dzidziso dzakaitwa nevanhu mumasangano. Zvitendero hazvichavakwi nekubatanidza Magwaro. MaKristu anogara zvawo mumasangano mavo vakadekara vachivimba nemashoko akataurwa nevanhu anoturikirwa kwavari vagere zvavo.
VAFIRIPI 2:12 Naizvozvo, vadikanwa vangu, sezvamakaterera nguva dzose, ndisati ndiripo, pedzisai kuponeswa kwenyu nokutya nokudedera;
Vhesi iri haritauri pamusoro pekuponeswa kubva kugehena. Tinowana kuponeswa uku nekutenda nenyasha chete. Ruponeso apa runoreva kuti tinofanira kudzidza chokwadi cheBhaibheri kuti tipesane nenguva yeKutambudzika kukuru iri kuuya. Kuponeswa kubva munguva yeKutambudzika kukuru.
Kune hondo yemweya, inomiririrwa nemucherechedzo wetsoka dzemufananidzo waDanieri wemuHedeni. Zvidimbu zvedare ndihwo hunhu hwemakumbo edare hweRoma yechipegani, yave kushanda iri mukereke yeRoman Catholic, nevanasikana vayo makereke akabuda mairi anoita hunhu hwayo.
Kutenda pfungwa dzisimo muMagwaro dzakaita seKisimusi, 25 Zvita, maIsita egi nemarabhiti acho, masangano, kereke inotongwa nemufundisi, Tiriniti, kutenda kuti mazita matatu ezvinzvimbo aBaba, Mwanakomana, neMudzimu unoyera iZita raMwari, kutaura kuti munoziva zvakavanzika zvisina kunyorwa zvakaita seKutinhira kunomwe, Zvisimbiso zvinomwe neZita idzva raJesu.
Asi dare rakaoma. Zvitendero izvi hazvisi nyore kurasa.
Roma yakatanga seguta rezvikomo zvinomwe.
Zvakazarurwa 17:9 Ndipo panokufunga kunenjere. Misoro minomwe ndiwo makomo manomwe, anogarwa nomukadzi.
MaRoma echipegani aive nemudzi wehurumende pachikomo chikuru. Apa ndipo paiitwa mitemo yavo yekufambisa hushe. Vemarudzi evatorwa vakauya neminondo yavo vakaparadza hushe hweRoma, chikomo chikuru chikapihwa ronda rakaipa kwazvo apo vabati vakarasikirwa nesimba ravo munezvematongerwo enyika uye zvechitendero.
Zvakazarurwa 13:3 Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa kusvikira parufu; asi vanga, raifanira kuvuraya, rakanga rapora; nyika yose ikashamiswa ikatevera chikara.
Pope akabva atanga kusimuka kuva nesimba. Negore 313 AD mubati mutsva Constantine akavaka kereke yeLaterani pachikomo cheCaelia (chimwechete chezvikomo zvinomwe zvekutanga) akaipa kuna bhishopu weRoma. Ndiyo mai chaivo vekereke yeRoman Catholic. Ndiyo nzvimbo inogara chigaro chaPope chehushe, ipapo mitemo inoitwa kuti itonge kereke yese yeRoman Catholic pasi rese. Apo vabati vehushe hweRoma pavakarasikirwa nesimba rekutonga nyika, saka ronda rakaipa riya rakupora, Pope ava nesimba pasi rese rezvematongerwo enyika uye zvechitendero uye hupfumi hwakakura kwazvo. Zvakare, munhu agere pane chimwechete chezvikomo zveRoma, akagara pachigaro chaSt Petro mukereke yeLaterani pachikomo cheCaelia, anotonga nhau dzepasi rese nevateveri vake vanodarika bhiriyoni mukuverengwa kwavo.
Kana zvichitariswa pakuverengwa vatungamiri vepasi rese vakawandisa vakaungana parufu rwa Pope John II.
Asi tsoka dzemufananidzo waDanieri wemuHedeni dzine ivhu rakasangana madziri. Ivhu rinokwanisa kukurisa zvipenyu zvinorarama. Zvinomera zvinokwanisa kukura muvhu. Ndiye Mwenga waKristu, kereke yechokwadi yakatorwa mukati memakore 2 000 enhorondo yekereke. Kereke inobva yatorwa pakupera kwenguva nomwe dzemakereke kunosangana naShe kumakore paKuuya kwake kwechipiri.
Daniel 2:41 Zvamakaona tsoka nezvigunwe, zvakaitwa pamwe nevhu romuumbi wehari, pamwe nedare, uchava ushe hwakaganhurwa; asi simba redare richavamo, zvamakaona dare rakavenganiswa nevhu
Ivhu rakanyorova rakavhenganiswa, rakapfava, uye riri nyore kuumba naro. Mwari anoda kereke yake yechokwadi kuti iumbwe pakutenda zvakanyorwa chete.
MaKristu anosarudza kukurudzirwa nepfungwa dzakasimba sedare dzemasangano avo nemapoka avo dzsiimo muMagwaro.
Nguva yekutambudzika inobva yatanga. Vasikana vakapusa, maKristu akaponeswa vanosarudza “chichechi-chechi” chemasangano avo pachinzvimbo chezvakanyorwa muBhaibheri, vanopinda munguva yeKutambudzika kukuru vofa.
Asi maprofita maviri Mosesi naEria, vachatora maJuda 144 000 kubva mukuipa kwenguva yeKutambudzika kukkuru, vovadzosa kuna Kristu mukati memakore matatu nehafu eKutambudzika. Izvi zvinomba zvazadzisa chiprofita chaDanieri.
Zvakazarurwa 11:2 Asi siya ruvazhe ruri kunze kwetembere, usaruyera; nokuti rwakapiwa vahedheni; vachatsika guta dzvene mwedzi inamakumi mana nemiviri.
Zvakazarurwa 11:3 Ndichapa zvapupu zvangu zviviri simba kuti zviporofite, zvakapfeka masaga, mazuva anechuru chinamazana maviri namakumi matanhatu
Mazuva 1260 akaringana nemakore matatu nehafu, akareba zvakafanana nemwedzi inamakumi mana nemiviri yemazuva makumi matatu.